Faneva Ima: Manainga ny Malagasy hiray fo sy fanahy amin’ny Barea an’i Madagasikara
samedi, 16 novembre 2019 10:26
Nanentana ny Malagasy, indrindra ny mpitia baolina kitra i Andriatsima Faneva Ima. Ao amin’ny pejiny facebook no nanaingany ny rehetra « Hiara-hirona eto Mahamasina anio ho an’ity Tanindrazana mamintsika ity ». « Manainga antsika rehetra hitrotro am-bavaka ny mpilalao, hiara-hanohana, ho iray fo sy fanahy », fa « Ny firaisankinantsika rehetra no amboara lehibe ho an’i Madagasikara » ka « Andao atambatra ny hery ho an’i Madagasikara sy Barea », hoy i Faneva Ima, izay manamafy fa « Barea Mandrakizay ! ».
Ity lalao anio hifandonan’i Madagasikara sy Etiopia ity, izay hiadiana tapakila hiatrehana ny CAN 2021 no lalao farany hataon’i Faneva Ima ao amin’ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra na Barea, ka hanaovany veloma ny mpakafy baolina kitra Malagasy sy ho fisaorany ireo rehetra namolavola azy ho tonga mpilalao baolina kitra sy ireo mpiara-milalao taminy.
Tamin’ny resadresaka nifanaovan’i Faneva Ima tamin’ny gazety Jejoo, « le quotidien des femmes » no nilazany fa “Saika “électricien” ny asako” raha tsy nanao baolina.
Mila ravinahitra any Arabia saodita i Faneva Ima ankehitriny, lohalaharana tompontoerana ao amin’ny klioban’ny Al Abha, diviziona voalohany any an-toerana.
Mpilalao isany novalavolaina tao amin’ny Uscafoot, an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra i Andriatsima Faneva Ima. Nilaravinahitra tany Frantsa izy nanomboka tamin’ny 2007, nilalao tao amin’ny klioban’ny FC Nantes, AS Cannes, US Boulogne, AS Amiens, Beauvais, US Créteil, FC Sochaux, AC Le Havre ary Clermont Foot.
Kapitenin’ny Barea an’i Madagasikara i Faneva Ima ; i Abel Anicet no hitondra io andraikitra io aorian’ny fitsaharany tsy ho ao amin’ny ekipam-pirenena intsony.